Atụmatụ nkuzi: Internet Pornography - The Reward Foundation
Home Atụmatụ nkuzi n'efu Atụmatụ nkuzi: Internet Pornography
Akụkụ pụrụ iche nke nkuzi wardgwọ Foundationgwọ isgwọ bụ ilekwasị anya na ọrụ ụbụrụ nwa. Nke a kachasị mma na-enyere ụmụ akwụkwọ aka ịghọta ma wulite ntụkwasị obi maka nsogbu ọ nwere ike iji foto ndị gba ọtọ. Collegelọ ọrụ Royal nke General Practitioners kwadoro na gwọ wardgwọ Regwọ ahụ na London iji kụziere ụlọ akwụkwọ ndị ọkachamara na-akpali agụụ mmekọahụ na-emetụta ahụike na ahụike.
Atụmatụ nkuzi: A pụrụ iji ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n’Intanet eme ihe dị ka ihe ọmụmụ pụrụ iche ma ọ bụ wepụta ya na ìgwè atọ ma ọ bụ anọ. Ihe nkuzi ọ bụla nwere ihe ngosi PowerPoint gbakwunyere Nkuzi Onye Nkuzi na, ebe o kwesịrị ekwesị, ngwugwu na akwụkwọ ọrụ. Ihe omumu a biara na vidio agbakwunyere, njikọ ndi na-ekpo oku na nyocha ndi ozo na ihe ndi ozo iji nwekwuo ihe omumu iji mee ka nkeji di iche, di irè ma nwekwaa onwe gi dika o kwere mee.
Ihe ọmụmụ 1: Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na-anwale
Ndị na-eto eto, karịsịa ụmụ nwoke, na-ejikarị ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'Intanet eme ihe, kama ọ bụzi ụmụ agbọghọ na-eme ya.
N'ime nkuzi a maka ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ sekọndrị, anyị tinyere ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na ikpe. Anyị na-ajụ ajụjụ ahụ, "Ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ọ na-emerụ ahụ?" Anyị na-enye ihe akaebe 8 iji nyere ụmụ akwụkwọ aka iche echiche site na nsogbu ahụ, katọọ ihe akaebe ahụ dị ka ndị juri, ma dee mkpebi ha na itinye echiche. Ha ga-anụ site na neurosurgeon, nwa okorobịa na nwa agbọghọ na-agbake ị pornụ ọgwụ ọjọọ, onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ na ụgwọ nke ụlọ ọrụ porn, onye na-emepụta porn 'ụkpụrụ' na nkọwa nke World Health Organisation.
Dị ka ndabere, thetù Ahụ Ike Worldwa nke Ọrịa International nke Ọrịa (ICD-11) na-ekwu na nsogbu ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-eji nwere ike ịchọpụta dị ka nsogbu ịkwa iko na-akpali agụụ mmekọahụ na dịka nsogbu riri ahụ. N'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ ndị na-akpali agụụ mmekọahụ, dị ka ụtaba ụtaba na iri afọ ole na ole gara aga na ị lungụ sịga na ọrịa cancer akpa ume, na-akwụ ndị ọkachamara ahụike ụgwọ ịgọnahụ na ọ nweghị njikọ dị n'etiti iji egwu egwu na ọtụtụ nsogbu ahụ ike. Ha na-arụ ọrụ ọtụtụ ebe na mgbasa ozi mmekọrịta na ịntanetị n'ozuzu ha. Nke a na - ebute oke mgbagwoju anya banyere mmetụta nke ihe na - akpali agụụ mmekọahụ ịntanetị karịsịa na ndị nọ n'afọ iri na ụma.
Ihe ọmụmụ 2: Lovehụnanya, Ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na mmekọrịta
Kedu otu mmadu si amata njirimara na akụkụ dị mma nke mmekọrịta chiri anya na otu ọ bụla?
Mmetụta dị a habitaa ka ikiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-enwe na nkwenye mmekọahụ, nrụgide mmekọahụ, mmanye, ndina n'ike, mwakpo mmekọahụ na ọbụbụenyi? Kedu nsogbu na ụgwọ ọrụ nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-eji? Na ihe bụ ihe ịrịba ama na mgbaàmà nke overuse?
Ihe omumu a nyere otutu usoro iji nyere umu akwukwo aka ka ha buru ihe nile ha nwere ma me ka ha na ndi mmadu nwee mmekorita.
Ihe nkuzi 3: Intanet na-akpali agụụ mmekọahụ na Ahụike
N'ime afọ ole na ole gara aga, enweela ịrị elu na nsogbu ahụike nke ọgụgụ isi n'etiti ndị na-eto eto. Mgbanwe a na-eme n'usoro ihe taa n'ihi ọrịa a emeela ka omume a ka njọ.
Ihe omumu a na-eleba anya na nkwenye nke aru na otu saiti ihe nlere na mgbasa ozi ndi mmadu nwere ike ime ka ndi ozo jiri ya na ndi ozo. Ọ na-elekwa anya na ụlọ ọrụ ịntanetị, ọkachasị ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ụlọ ọrụ ịgba egwu, na-eleba anya na adịghị ike nke ụbụrụ nwata iji mee ka ha bụrụ ndị ọrụ ha. Upmụ akwụkwọ na-achọpụta na saịtị anaghị akwụ ụgwọ anaghị akwụ ụgwọ n'ezie. Companieslọ ọrụ Internetntanetị na-eme ọtụtụ ijeri dollar / pound site na uche onye ọrụ, ọrịre nke data nkeonwe ha na mmasị maka ebumnuche mgbasa ozi, peeji nke ebudatara na ọrịre nke ngwaahịa ndị metụtara ya.
Ebumnuche akwukwo a maka umu akwukwo ulo akwukwo di elu mana enwere ike imeghari ya maka ulo akwukwo. Ebumnuche bụ iji mee ka ụmụ akwụkwọ mata ihe dị mma na ihe bụ nsogbu na onwe ha na ndị ọzọ na, mgbe nsogbu bilitere, mara otu esi achọ nkwado ozugbo enwere ike site na isi mmalite.
Ọ na-enye usoro dị mma iji belata ojiji ịntanetị na maka iwulite ụlọ.
Ihe ọmụmụ 4: Nnukwu Ahụhụ Porn
Ihe nkuzi a na-emelite eziokwu na ọnụọgụ sitere n'okwu TEDx a ma ama, 'Nnukwu Ahụmịhe Ahụhụ Ahụ' site na 2012. Ruo ugbu a okwu ahụ enweela ihe karịrị nde 14 ma tụgharịa ya n'asụsụ 20.
Ọ na-akọwa ihe ize ndụ dị na ịindụbiga mmanya ókè na ịntanetị n'oge oge, dị ka nrụrụ erectile na-akpali agụụ mmekọahụ, na ihe mere ndị na-eto eto ji ewe ogologo oge iji weghachi ahụike mmekọahụ karịa ụmụ nwoke ndị okenye.
Ihe omumu a n’enye otutu akuko banyere ndi ntorobia ndi n’ahu ike, ndi di ike, ndi n’atu ahia na ndi n’arusi oru ike na ndi n’adota ala n’ebe ndi di na nwunye ha kwusiri egwu egwu.
E nwekwara ihe enyemaka iji gwa ụmụ akwụkwọ ọ bụrụ na ha chọọ ịmatakwu ozi.